Indlu yango-1920, kwimizuzu nje eyi- ukusuka kwidolophu yaseKearney - I-Airbnb
Indlu yango-1920, kwimizuzu nje eyi- ukusuka kwidolophu yaseKearney
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSueZan
USueZan ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Le yindlu eyakhiwe ngobuchule eyimbali ekwindawo entle yaseKearney. Uhamba umgama omde ukuya kwidolophu yaseKearney KwiBricks apho uza kufumana iivenkile ezininzi, iivenkile zokutyela kunye neebhari. IMona (iMuseum of Nebraska Art) ikwanazo neebloko ezimbalwa ukusuka endlwini. Ukuba uyathanda ukuhamba ngebhayisekile, ukuhamba okanye ukubaleka, kukho umzila wokuhamba/wokuqhuba ibhayisekile ukusuka kwiPaki yeFort Kearney. Le ndlu ilala abantu abayi-8 ngokukhululekileyo kwaye inegumbi lokuphumla kwigumbi elingaphantsi elinetafile yokuqubha nebhodi yokuqubha.
Iindwendwe ziza kuzisebenzisa ngokupheleleyo zonke iindawo zokuhlala ngaphandle kweekhabhathi ezimbalwa zabucala. Oku kuquka ukusetyenziswa kwegumbi lemidlalo elikumgangatho ongaphantsi elinebhodi yokuqubha netafile yokuqubha. Igumbi lokuhlamba impahla elipheleleyo namagumbi okulala ayi-4 anegumbi lokuhlala. Iyadi engasemva kunye neveranda ebiyelweyo. Igaraji ebethelelweyo yeyabucala ibe akuvumelekanga ukungena kuyo.
Le ngingqi yindawo ekhuselekileyo nethuleyo yakudala ekwiiblokho eziyi-2 ukusuka kwidolophu kunye neebloko eziyi-4 ukusuka kwisibhedlele saseGood Samaritan. Ukuhlala kwiveranda engaphambili kuyakhuthazwa. Ivenkile epheleleyo yokutya ikumgama wokuba ungahamba ngeenyawo. (1 block)
Umbuki zindwendwe ngu- SueZan
Siza kufumaneka kwiindwendwe ngomyalezo okanye ngokuzifowunela.